ဖိလစ်ပိုင်၏ Cignal တီဗီသည်ဆက်သွယ်ရေးကိုစိတ်ကူးဖြင့်ကစားခြင်းစွမ်းရည်ကိုချဲ့ထွင်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ဖိလစ်ပိုင် '' Cignal တီဗီကိုမြင်ယောင်ကြည့်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူပလေးအောက်ကိုစှမျးတိုးချဲ့
ကျစ်လစ်သိပ်သည်း, အစွမ်းထက်ပလေးအောက်ပလက်ဖောင်း functionality နဲ့ခံနိုင်ရည်ကထပ်ပြောသည်, အနာဂတျမှာ IP ချိတ်ဆက်ဖို့နင်းသောကျောက်ကိုထောက်ပံ့ပေး
ဟောင်ကောင်, 22 သြဂုတ် 2019 - Cignal တီဗီ, အဆောင် ဂြိုဟ်တု ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာထုတ်လွှင့်မှအပြည့်အဝပေါင်းစည်း Versio ™ modular ပလေးအောက်ကိုဖြေရှင်းချက်ကို အသုံးပြု. ၎င်း၏ပလေးအောက်ကိုစွမ်းရည်မြှင့်တိုးချဲ့ထားပါတယ် ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ Cignal တီဗီတိုင်းပြည်အနှံ့နှစ်ယောက်ထက်ပိုသန်းစာရင်းသွင်းသူရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရေဒီယိုနှစ်ခုလုံးကိုအပေါ်ပရီမီယံအကြောင်းအရာထုတ်လွှင့်။ ယင်း၏ပရိသတ်ကိုများ၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်, Cignal တီဗီအစဉ်မပြတ်အရည်အသွေးမြင့်အကြောင်းအရာနှင့်လိုင်းများကထပ်ပြောသည်။ အသစ်ပလေးအောက်ကိုစနစ်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့အနာဂတ်-proofed, ဆော့ဖ်ဝဲ-based ဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့စျေးကွက်မှအပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုနဲ့အင်တာနက်အမြန်နှုန်းတိုးမြှင့်ပေးသည်။
"ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရေဒီယိုနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးထွားကျနော်တို့တတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်ပလေးအောက် channel များကိုထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်ဆိုလို," ဘင်နီဒစ် V ကို Galang, ပထမဦးစွာဒုတိယသမ္မတကွန်ယက်အင်ဂျင်နီယာ & စစ်ဆင်ရေး, Cignal တီဗီကဆိုသည်။ "ဒါဟာအပိုဆောင်းစွမ်းရည်ပြတ်တောက် minimize လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိစစ်ဆင်ရေးသို့ချောမွေ့စွာ slotted အရေးကွီးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းအသွားအလာသို့တိကျစွာသငျ့အလျင်အမြန်အဖြေတစ်ခုပေး, အ redundancy မှတဆင့်ကျနော်တို့လိုအပ်သောယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်လုံခြုံရေးသေချာနိုင်ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ အချိန်ကိုကြွလာသောအခါသစ်ကိုတပ်ဆင်မှုနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည် IP ကိုအကူးအပြောင်းကိုဦးတည်နေတဲ့အပြုသဘောခြေလှမ်းတရပ်ပါစေနိုင်ပါသည်။ "
ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ တိုင်း channel မှာ redundancy များကို4+ 1 လိုင်းများမှစနစ်ချဲ့ထွင်သောပထဝီလူစုခွဲ Versio ဖြေရှင်းချက်အပေါ် System Integration Composite နည်းပညာ Inc ကိုအတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါလိုင်းများကို Cignal ရဲ့တည်ဆဲပလက်တီနမ်™ VX Router ကနေတစ်ဆင့် switching, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအသံလွှင့်များ၏စွမ်းရည်ရှိသည်။ ရဲ့စဉျးစားကွညျ့စျေးကွက်-သက်သေပြ ADC ကို™အလိုအလျောက်စနစ်တစ်ခုလုံးကိုလုပ်ငန်းအသွားအလာကိုဖြတ်ပြီး, ယုံကြည်စိတ်ချရသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ထိရောက်သောစစ်ဆင်ရေးသေချာ။
အကြောင်းအရာ 10 Gigabit ဖိုင်ဘာ Ethernet ကျော် Versio ခင်းကျင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့မြင်ယောင်ကြည့်ပါ Versio ™ IOX SAN high-performance ကိုအွန်လိုင်းသိမ်းဆည်းမှုစနစ်, ပေါ်သိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ Versio software ကိုလည်းထုတ်လွှင့်ဂရပ်ဖစ်ပေးသည်နှင့်Nexio® Motion ™လုပ်ငန်းအသွားအလာအင်ဂျင်အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုပေးသည်။ မြင်ယောင်ကြည့်ပါနှင့် Composite နည်းပညာရဲ့စဉျးစားကွညျ့ပြည်တွင်းနှင့်ဒေသတွင်းအင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့များအနေဖြင့်ခိုင်ခံ့ဆက်လက်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူတစ် turnkey ထောက်ပံ့ရေးအဖြစ်စီမံကိန်းကယ်နှုတ်တော်မူ၏။
ဘို့ ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ, Mathias Eckert, SVP & GM က, EMEA & ပွေး, "ကဆက်ပြောသည်တစ်ခု MCR ထုတ်လွှင့်စစ်ဆင်ရေးများအတွက်မစ်ရှင်-အရေးပါသောအချက်အချာဖြစ်ပါသည် - ဆိုကျချိန်ကိုဆုံးရှုံးင်ငွေကိုဆိုလိုသည်။ ဒါဟာလည်ပတ်စောင့်ကြည့်ထိန်းသိမ်းနည်းအဖြစ်ဝေးနိုင်သမျှလွယ်ကူအဖြစ်အလိုအလျောက်သောအလွန်အမင်းယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်အကျိုးရှိစွာအလုပ်ခွင်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ software ကို-သတ်မှတ်ဖြေရှင်းချက်ကျွန်တော်တို့ကိုအဖြစ်အိုင်ပီတစ်ခုလမ်းကြောင်းများကိုတိကျစွာချုပ်စနစ်များကိုမှခွင့်ပြုနှင့် Cignal တီဗီကဒီအကူးအပြောင်းစေရန်ဆန္ဒရှိသော်လည်းအခါ။ "
အကြောင်းပိုသိချင်တယ်ဆိုရင် ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ'' ထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.imaginecommunications.com.
Dejero သည်ဥရောပရုပ်သံလိုင်းမိတ်ဖက်အသစ်များကိုကြေငြာခဲ့သည် - သြဂုတ်လ 5, 2020
အနာဂတ်အုပ်စုသည် Pixotope Version 1.3 တွင်ထူးခြားသောရောနှောထားသော Reality Advances များကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် - ဇူလိုင်လ 23, 2020
Imagine Communication သည် Sharjah Broadcasting Authority ၏ Al Wousta Channel ကို IP Playout Solution ပေးသည် - ဇူလိုင်လ 20, 2020
ဘင်နီဒစ် V ကို Galang ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ Cignal တီဗီ Composite နည်းပညာ Inc က လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ အိုင်ပီဆက်သွယ်မှု Mathias Eckert MKM Marcomms MKM Marketing ကိုဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး Nexio Motion ဖိလစ္ပုိင္ ပလက်တီနမ် VX Router က ပလေးအောက် ခံနိုင်ရည် အပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှု တီဗီနည်းပညာ Versio ™ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-08-22
ယခင်: အနီရောင်ဧရာ Thrones VFX Pt ၏ဂိမ်းဦးလွတ်မြောက်။ 2: အဆိုပါမှာတော့ဖုတ်ကောင်မြင်း
နောက်တစ်ခု: အယ်ဒီတာ + Colorist